Izinto ezili-12 ezichaphazela isiCwangciso sakho se-imeyile saMazwe ngaMazwe | Martech Zone
Sincedise abathengi nge kumazwe ngamazwe (I18N) kwaye, ukubeka nje, akumnandi. Iimpawu ze ukwenza ikhowudi, uguqulo, kunye nokwenziwa kwendawo yenze ibe yinkqubo entsonkothileyo.
Ukuba yenziwe gwenxa, inokuba neentloni ngendlela emangalisayo ... ungasathethi ke ngokungenampumelelo. Kodwa i-70% yabasebenzisi be-intanethi abali-2.3 yezigidi kwi-Intanethi abazizithethi zesiNgesi zemveli kwaye yonke i-1 yedola echithwe kulwakhiwo ifunyenwe ine-ROI ye- $ 25, ke inkuthazo ikhona ukuba ishishini lakho liye kumazwe aphesheya ukuba kunokwenzeka.
Iimonki ze-imeyile zibeke ndawonye i-infographic kwi Ukuya kwihlabathi liphela ngentengiso yakho ye-imeyile Isicwangciso esibonelela ngezinto ezili-12 ezichaphazela impumelelo yentengiso yakho ye-imeyile.
Ukuqwalaselwa koLwimi kunye nokukopa - yenza uphando lwakho ngeelwimi ezininzi ukunqanda amagama anokuchaphazela ukuhanjiswa.
Ukukhetha Abaguquleli -Akwanelanga ukuqonda ukuba ungaguqulela njani, izixhobo zakho zoguqulo kufuneka ziqonde umxholo ngokunjalo.
I-imeyile iAesthetics Uyilo lwe-imeyile yakho kufuneka yamkelwe ngokwenkcubeko kubaphulaphuli bakho.
Ulawulo lweNkqubo - kuyilo kunye noguqulelo ukuya kwingxelo, kuya kufuneka ukwazi ukulinganisa ngokulula ifuthe leenzame zakho kwingingqi.
UkuFometha komyalezo kunye noBeko -I-RTL (Ekunene ukuya ekhohlo) okanye iilwimi ezinesiko elinokufuna ubume obulungiselelwe iqela ngalinye.
Isicwangciso sokuQala esiSelfowuni -Ukuba ungowamazwe aphesheya, kunokwenzeka ukuba uhambise! Kungcono ukuba ulungiselelwe iiwindows ezincinci kunye neendawo zokujonga.
Izikhokelo ezisemthethweni -Uqiniseke ukuba unguye Ukuthobela imithetho yelizwe ngalinye Ukuqinisekisa ukuba awophuli nayiphi na imithetho kwaye unokwandisa ukuhanjiswa kunye nabaNikezeli beenkonzo ze-Intanethi.
zobuqu Ukwenza ii-imeyile zamanye amazwe kukonyusa iintlobo ezahlukeneyo zokwenza into onokuyenza ukuze wandise ukuvulwa, ukucofa kunye nokuguqula.
Iifowuni zokuSebenza -Ungayi ngaphezulu kwebango lakho njengoko uzama ukufumana ababhalisile ukuba bacofe, amanye amazwe anemithetho engqongqo kwintengiso kunye nokunyusa.
Isikhathi Ixesha lexesha, iiholide zommandla, kunye neeshedyuli zomsebenzi zonke zinokuchaphazela amaxabiso akho avulekileyo kunye nokucofa.
Ulawulo lweDatha kunye noLuhlu -Gcina uluhlu lwakho lusebenza kwaye luhlaziyekile, uqinisekisa ukwahlulahlula kunye nokucoca amandla ngokwengingqi.
IPESTLE - imele ezopolitiko, ezoqoqosho, ezentlalo, ezobuchwepheshe, ezomthetho kunye nokusingqongileyo. Yiba nefuthe kwimpembelelo yendawo yokuthumela umyalezo kunye nale mibono.
Nantsi yonke infographic, jonga Uhlobo olusebenzayo kwiiMonks ze-imeyile.
tags: lwesigodiikhowudi ye-imeyilei-imeyile infographicI-imeyile yamanye amazweI-imeyile yamanye amazweulwakhiwo lwe-imeyileulwakhiwo lwe-imeyileiimonki ze-imeyileimeyile iimonki infographicInguqulelo ye-imeyilekhowudiinguqulelo yabantuukuguqulelwa komatshinipestleekunene ukuya ekhohlortlizikhokelo zogaxekiletranslationyintoni ipestle
I-Wipster: Ukuphononongwa kweVidiyo kunye neQonga lokuVunywa